Kuchenesa Mhepo Vagadziri - China Mhepo Kunatsa Fekitori nevatengesi
Yakanaka Yemukati Yemukati Mhepo Unhu, Yakakwira Oxygen Zvemukati Iyo imwe-nzira nyowani mweya kusefa firita system inopa yekunze mhepo nyowani kukamuri ine yakakwira kuchenesa. Yakagadzirirwa mafirita maviri ane PM2.5 filtration rate inodarika 95%. Inogona kushandiswa kushanda pamwe chete neHoltop simba kupora mhepo yekuchenesa mweya iri nani kana inoshandiswa yakazvimiririra yekunatsa mweya mune yekugadzirisa mweya system. Iyo ine yakasarudzika mashandiro emukati kutenderera. Mumamiriro ezvinhu kana zvisina kukodzera ku ...